Donation of MUM Org
Miss Universe Myanmar 2014 ၏ ပရဟိတနှင့် လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင် အလှူငွေကောက်ခံရရှိမှု စုစုပေါင်း ငွေ ကျပ် ၁၅ သိန်း မှ ဇေတ၀န် ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းသို့ ငွေ ကျပ် ၅ သိန်းနှင့် စာရေးကိရိယာများအား (၂၃.
MUM 2014 Camp ခရီးစဉ် စတင်ပါပြီ
Miss Universe Myanmar 2014 ဆန်ခါတင်အလှမယ် ၂၀ ဦးသည် လူမှုရေး လှုပ်ရှားမှုခရီးစဉ်အဖြစ် ၂၂.၆.၁၄ တွင် Bagan သို့စတင်ထွက်ခွာပါပြီ.......
MUM 2014 Camp News
Miss Universe Myanmar 2014 ဆန်ခါတင်အလှမယ် ၂၀ ဦးသည် လူမှုရေး လှုပ်ရှားမှုခရီးစဉ်အဖြစ် ၂၂.၆.၁၄ တွင် သရပါဟိုတယ်နှင့် Amazing Bagan ဟိုတယ်တို့ဧ။် ဖိတ်ကြား ချက်အရသွားရောက်မည် ဖြစ်ပြီး ၂၆ ရက်နေ့တွင် နန်းမြိုင်ဟိုတယ်ဧ။် ဖိတ်ကြားချက်အရ ပြင်ဦးလွင်မြို့သို့သွားရောက်မည
မယ်စကြ၀ဠာ (မြန်မာ) ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ လူမှုရေးလှုပ်ရှား မှု အစီအစဉ်အဖြစ် သွားရောက်ရန် စီစဉ်ထားသော ကချင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်ကို ရာသီဥတု အခြေအနေကြောင့် ဖျက်သိမ်းလိုက် ကြောင်း ကြေငြာအပ်ပါသည်။
Miss Universe Myanmar 2014 ပြိုင်ပွဲဝင် 20 သည် End of JUNE တွင် "Activities များ၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို လူမှုရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ အတွက် အလှူငွေ ထည့်ဝင်လှူဒါန်း လိုသူများ နှင့် ပံ့ပိုးပေးလိုသူများ အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များ ကို ဆက်သွယ်
How to vote for "Miss Famous"?
Miss Universe Myanmar 2014 Official Voting Links for "Miss Famous" Prize
Miss Famous ဆုအတွက် "Website Vote" နှင့် "Facebook Vote" များကို စတင် လက်ခံနေပါပြီ....
• "Miss Famous" ဆုအတွက် စည်းကမ်းချက် များ •
သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်း မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပပြီးစီး
သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်း မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား သို့ဖိတ်ကြားခြင်း
Miss Universe Myanmar 2014 အတွက် သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်း မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား ကို (၁၀.၆.၂၀၁၄) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်း မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား သို့ တက်ရောက်ပေးကြပါရန် သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်း များအား လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ဆန်ကာတွင် ရွေးချယ်ခဲ့သည့် ပုံရိပ်များ
Miss Universe Myanmar 2014 ဆန်ကာတင် အယောက် (၂၀) ရွေးချယ်ပွဲကြီးကို (၄.၆.၂၀၁၄) ရက်နေ့ နံနက် (၉) နာရီတွင် ရန်ကင်းစင်တာဘေးရှိ ရွှေပုပ္ပားဆေးခန်းအပေါ်ထပ်ရှိ မြန်မာလေညင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရုံးခန်းတွင် ပြုလုပ်ကျင်းပ ခဲ့ပါသည်။
2014 Finalist Competition
Miss Universe Myanmar 2014 ဆန်ကာတင် အယောက် (၂၀) ရွေးချယ်ပွဲကြီးကို (၄.၆.၂၀၁၄) ရက်နေ့ နံနက် (၉) နာရီတွင် ရန်ကင်းစင်တာဘေးရှိ ရွှေပုပ္ပားဆေးခန်းအပေါ်ထပ်ရှိ မြန်မာလေညင်း ကုမ္ပဏီလီမိတက် ရုံးခန်းတွင် ပြုလုပ်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
Bangkok Airways's Brand Ambassador
Miss Universe Myanmar 2013 မိုးစက်ဝိုင် ကို Bangkok Airways' မှ Brand Ambassador အဖြစ်ခန့်အပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကို 28 April 2014 ရက်, Park Royal Hotel တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
Miss Teen Myanmar Competition
Miss Teen Myanmar 2014 ပြိုင်ပွဲကြီးကို October လ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါ၍ ၀င်ရောက်ယှဉ် ပြိုင် လိုသူများ အနေဖြင့် "Form" များကို အောက်ပါ Link တွင် Download လုပ်၍ သော် လည်းကောင်း၊ Hello Madam Media Group ၏ ရုံးချုပ်တွင် လာေ၇ာက်ထုတ်ယူ၍
Para Sea Game
(၇) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံမသန်စွမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲသို့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် မြန်မာအမျိုးသမီး အားကစားသမား များစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမြှင့် တင်ပေးရန်နှင့် အောင်မြင်မှု ရရှိစေရေးအတွက် ငွေကျပ် (၅) သိန်း ကို "Miss Universe Myanmar Organization" မှ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါ
Donation for Eight Orphanage Girls
Miss Universe Myanmar Organization မှ Miss Universe Myanmar Foundation စတင်ထူထောင်သည့် အထိမ်း အမှတ်အဖြစ် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ အမျိုးသမီးသက်မွေးအိမ်တွင်းမှု သင်တန်းကျောင်းတွင် လိုအပ်လျှက်ရှိသော ငွေကျပ် ၂ သိန်း ၆ သောင်း တန်ဖိုးရှိ ဘီတင်စက်၊ ငွေကျပ်
အားကစားအဖွဲ့ သို့ အားကစားအဖွဲ့ သို့ အလှူငွေပေးအပ်ပွဲအလှူငွေပေးအပ်ပွဲ
Miss Universe Myanmar Foundaiton ၏ ဒုတိယအကြိမ် လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည့် အလှူငွေပေး အပ်ပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံ အလေးမ၊ ကာယဗလ၊ ကာယအလှ အားကစားနည်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီး အားကစားအဖွဲ့ချုပ်၏ နာယက ဒေါ်စိုးယုဝေမှ Miss Univers Myanmar Foundation နှင့်အတူ (၂၇)ကြိမ်မြောက် အေ